FAQs - Xiamen NEWYEA Technology Co., Ltd.
Ohatrinona ny vidin'ny fiantsonan'ny fiara mandeha amin'ny herinaratra?
"Vidiny hametrahana toby fiampangana fiara
Fandefasana vidin'ny fiantsenana EV any an-trano
Vola antonony nasionaly ($ 1,200)
Salan'isa antonony ($ 850- $ 2,200)
Vidiny farany ambany ($ 300)
Sarany farafahakeliny (4500 $) "
Ohatrinona ny vidin'ny fametrahana tobim-pametrahana fiara elektrika any India?
Ny fametrahana charger miadana dia mety mitentina Rs 2-3 lakh miankina amin'ny teknolojia, hoy ny tompon'andraikitra iray amin'ny governemanta.
Mahazo tobim-piantsenana mamidy ve ianao rehefa mividy fiara elektrika?
Raha te-hisafidy fiara elektrika ao an-trano ianao dia mila teboka famerenana trano apetraka amin'ny toerana ipetrahanao ny fiaranao elektrika, na tariby famatsiana EVSE ho an'ny takelaka plug 3 pin ho famerenana miverimberina. Ny mpamily mazàna dia misafidy teboka famerenana trano natokana satria haingana kokoa io ary manana endrika fiarovana azo antoka.
Inona no gara fiampangana EV tsara indrindra?
"Safidin'ny Editor: JuiceBox Pro 40 miaraka amin'ny JuiceNet. ...
ChargePoint Home Flex WiFi Enable EV Charger. ...
Duosida Haavo 2 Portable EV Charger. ...
MUSTART Haavo 2 Portable EV Charger. ...
Tokony handoa vola ny fiarako mandeha amin'ny herinaratra isan'alina ve aho?
Hay ny ankamaroan'ny mpamily fiara mandeha amin'ny herinaratra dia tsy manelingelina akory ny miditra ao isaky ny alina, na voatery hameno vola feno. Manana fahazarana mitondra fiara tsy tapaka ny olona, ​​ary raha midika izany hoe 40 na 50 kilaometatra isan'andro, dia plug-in roa isan-kerinandro no tsara. ... Ho an'ireo 40 isan-jato hafa, misy ny afaka maka vola any am-piasana.
Afaka mametraka charger Level 3 ao an-trano ve aho?
Toerana fiampangana ambaratonga 3, na DC Fast Charger, no tena ampiasaina amin'ny sehatry ny varotra sy ny indostria, satria matetika dia lafo be izany ary mitaky fitaovana manokana sy matanjaka hiasana. Midika izany fa ny DC Fast Charger dia tsy misy amin'ny fametrahana trano.
Tena mitsitsy vola amin'ny fiara mandeha amin'ny herinaratra ve ianao?
Hijery misimisy kokoa ao amin'ny www.energy.gov/eGallon. Ny fiara mandeha amin'ny herinaratra plug-in (fantatra amin'ny anarana hoe fiara elektrika na EV) dia ahafahanao manangona vola, miaraka amin'ny vidin-tsolika ambany kokoa noho ny fiara lasantsy mahazatra. ... Tsy dia lafo loatra ny herinaratra noho ny lasantsy ary ny EV kosa mahomby kokoa noho ny fiara mpitondra lasantsy.
Azonao atao ve ny mampiditra fiara elektrika ao amin'ny outlet mahazatra?
Ny fiara elektrika novokarina betsaka amin'izao fotoana izao dia misy fitaovana famahanana izay azonao ampidirina amina outlet 110v mahazatra. Ity singa ity dia ahafahana mameno ny EV avy amin'ny toeram-pivarotana mahazatra. Ny maharatsy ny fiampangana EV amin'ny outlet 110v dia maharitra fotoana fohy.
Ohatrinona ny vidin'ny fiantohana ny fiara elektrika any Walmart?
Misy ihany koa ny charger de la level 2, 240-volt ho an'ny fiara elektrika sy hybrida plug-in izay tsy manana fahaiza-miasa DC haingana. Ny vidin'ny fampiasana tobim-piantsonan'ny mpamily herinaratra dia 12 cents isaky ny kWh - salan'isa nasionaly.
Haharitra hafiriana ny fiara elektrika?
"Tombana amin'ny androm-piainana
Ny bateria rehetra ao anaty fiara elektrika amidy any Etazonia dia misy fiantohana izay maharitra valo taona farafahakeliny na hatramin'ny 100.000 kilaometatra, hoy ny CarFax. "
Ahoana no nametrahan'ny Sinoa fiara mpitondra angovo 5 tapitrisa vaovao teny an-dalana tao anatin'ny folo taona？
Tamin'ny faran'ny taona 2020, nisy dingana lehibe iray nanjary rehefa niasa tamina araben'i Shina ireo fiara misy angovo vaovao 4,92 tapitrisa (NEV), ao anatin'izany ny herinaratra bateria, hybrid plug-in ary ny solika. Ireo dia 1,75% amin'ny tahirin'ny fiara fitaterana. Folo taona lasa izay, dia nandefa NEV 20 000 teo ho eo nanerana ny firenena i Sina, ary vao valo taona lasa izay no nametrahan'i Shina paikady maharitra ho an'ny fampandrosoana NEV izay mikendry fiara mitentina 5 tapitrisa amidy tamin'ny faran'ny taona 2020. Midika izany fa amin'ny folo taona monja dia nitombo 250 heny ny isan'ny NEV ao Shina!